ယံုလိုပံုအပ္မိလိုက္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ - APANNPYAY
Home / ဘ၀ႏွင္႔အခ်စ္က႑ / ျဖစ္ရပ္မွန္ / ယံုလိုပံုအပ္မိလိုက္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္
ယံုလိုပံုအပ္မိလိုက္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္
Apann Pyay 8:04 PM ဘ၀ႏွင္႔အခ်စ္က႑ , ျဖစ္ရပ္မွန္ Edit
သူတို႔ဟာ မၾကာမတင္မွာပဲ AIDS ေရာဂါႀကီးကို လံုးဝ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္တဲ့ ေဆးကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိၾက ေတာ့မယ္ရယ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒီေန႔ကို ကြ်န္မ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္ရွင္…..။
- အေကာင္းဆံုးကေတာ့ HIV ပိုး ကင္းသူ ျဖစ္သင့္တာေပါ့….
- ခ်စ္သူကို လံုးလံုးႀကီး မယံုၾကည္ လိုက္ပါနဲ႔ …..
ဒီနေ့ဟာ မိုးနေ့ပါပဲ။ ကျွန်မ ပြတင်းအပြင်ကို ထိုင်ငေးနေတာပေါ့။ ကျွန်မတစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်လေ။ ကျွန်မ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။
ခုလိုပဲ အထီးကျန်နေရင် ကျွန်မတွေးတော ချောက်ချားရမြဲပါ။ လူလူသူသူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ကျွန်မ ခံစားနေရတာတွေကို ဖွင့်ဟဖို့ မတွေးပါဘူး။ ကျွန်မ လူတွေကို ကြောက်နေပါတယ်။
ကျွန်မဟာ ရောဂါသည် တစ်ယောက်။
ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ခြေ၊ လက်၊ ခန္ဓာကိုယ်တို့ဟာ ရောင်ကိုင်းကိုင်း ဖြစ်နေတာမို့ အင်္ကျီ အဝတ်အစားဖားဖားလျားလျား ကြီးတွေကို အမြဲဝတ်ရပါတယ်။ လူမသိအောင် ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ ခဏခဏနေမကောင်း ဖြစ်နေတော့ ဆရာဝန်ဆီ လည်း မကြာမကြာ ရောက်ရတာပေါ့။
အဲဒီအခါ ရပ်ကွက်ထဲကလည်း သံသယ ရှိလာမိကြတာပေါ့လေ။ အရင်တုန်းက ကျွန်မဟာ ကျန်းကျန်း မာမာ ဖွံ့ဖွံ့ ဖြိုးဖြိုး မဟုတ်လား။ နေမကောင်း ဖြစ်ကတည်းက ကျွန်မ ပိန်သွားတာ သိပ်သိသာပါတယ်။ တချို့က တော့ စပ်စုတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ “ကျောက်ကပ် မကောင်းရတဲ့ အထဲ ယားဖုတွေ လည်း ပေါက်နေ တယ်” လို့ပဲ ဖုံးဖိ ပြောနေရတာပေါ့။ တချို့ကတော့ ကျွန်မကို ဘာမှမမေးကြ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မျက်လုံး တွေက စကားပြော ပါတယ်။ ကျွန်မကို မယုံသင်္ကာ ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အကြောင်း တီးတိုး တီးတိုး သဖန်းပိုး လုပ်နေပုံပါပဲ။ ကျွန်မသိသလိုပဲ။ သူတို့ ကျွန်မအကြောင်း သိနေပြီလို့။ သူတို့ အဲသလို ကျွန်မကို ကြည့်ကြ။ အကဲခတ်ကြတာဟာ ကျွန်မအကြောင်း သူတို့ စဉ်းစာ နေကြလို့ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
ကျွန်မအဖြစ်ကို ဘယ်သူ့မှ ဖွင့်မပြောနိုင်ပါဘူးရှင်။ ကျွန်မ ဖွင့်ပြောရင်လည်း သူတို့ ကျွန်မကို သတီကြတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မဟာ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဆူးငြောင့် ခလုတ်ပါပဲလေ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မ မိသားစုအတွက်လည်း ကျွန်မ မချိပါဘူး။ ကျွန်မကြောင့် မိသားစုပါ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဆူးငြောင့် ခလုတ်ဖြစ်မှာ ကျွန်မ မလိုလားဘူး။ ခုတော့ ကျွန်မဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်အဆံ မရှိအောင် နေနေ ရပါပြီရှင်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မိသားစုကို ဖွင့်ပြော ရပါတော့တယ်။ ကြာရှည်ဖုံးထားလို့ မရတော့ ဘူးလေ။ ကျွန်မရဲ့ ညီမနဲ့ မောင်ငယ်လေးဆိုတာ ဝမ်းနည်း လိုက်ကြတာ။ မပြောပါ နဲ့တော့။ ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေကတော့ စိုးရိမ်ပူပန် ကြတာပေါ့။ ကျွန်မကတော့ အဖေတို့၊ အမေတို့ကို ပြောပါတယ်။
“သေခြင်းတရားဆိုတာ လူ့ဘဝမှာ ဖြစ်မြဲပါပဲ။ သေမင်းက ကိုယ့်ဆီ မြန်မြန်လာမှာနဲ့ ဖြည်းဖြည်း လာမှာပဲ ကွာပါတယ်” လို့။ ဒီတော့လည်း အဖေတို့၊ အမေတို့ ခမျာ စိတ်နည်းနည်း သက်သာရာရ သွားရှာကြပါ ရဲ့လေ။
ဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်မ မိသားစုနဲ့ ကျွန်မကြားမှာ နားလည်မှု ပိုများလာပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီ ထားနိုင် လာကြပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ဆရာဝန်တွေကို အကြီးအကျယ် မျှော်လင့် နေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဟာ မကြာမတင်မှာပဲ AIDS ရောဂါကြီးကို လုံးဝ ကာကွယ် တားဆီးနိုင်တဲ့ ဆေးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြ တော့မယ်ရယ်လို့ပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကို ကျွန်မ စောင့်မျှော် နေပါတယ်ရှင်…..။
ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ စဉ်းစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖေတို့၊ အမေတို့၊ ညီမလေး၊ မောင်လေး တို့ကို သနားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မလို ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ အပေါင်းအသင်း တချို့ကလည်း “ကိုယ့်ကိုယ် ကို သေကြောင်း ကြံတယ်ဆိုတာ သူများကို သတ်တာထက်တောင် အပြစ်ကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် တို့တော့ သေကြောင်း ကြံစည်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားဘူး” လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း ကိုယ့် ကိုယ်ကို သေကြောင်း ကြံစည်ဖို့ မစဉ်းစားတော့ဘဲ အသက်ပိုပြီး ရှည်ရှည် နေရဖို့ကိုသာ မျှော်လင့် နေပါ တော့တယ်။
ကျွန်မဟာ Phuen Keaw ဆိုတဲ့ AIDS ဝေဒနာရှင်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကိုလည်း သွားပါ တယ်။ အဲဒီမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေ၊ သူနာပြုတွေဟာ အရမ်း သဘောကောင်းကြတာပဲ။ လှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးကိုလည်း လုပ်ပေးကြတယ်။ သူတို့ဟာ သိပ်ကြင်နာတယ်။ နားလည်မှု ရှိတယ်။
ကျွန်မအကြောင်း ပြောပြရဦးမယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်လောက်မှာ ကျွန်မဟာ ဗန်ကောက်မှာ အလုပ်လုပ် ခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ နေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ရလာတယ်။ သူတို့ဟာ “မောင်မစ္စက”တွေပါ။ အနေကြာလာတော့လည်း ရောရောဝင်ဝင် နေမိရာကနေ ကျွန်မ သူတို့နဲ့ ပရောပရီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အစိုးရကလည်း AIDS ရောဂါဆိုးကြီးကို ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လှုံဆော်ရေးတွေ အရမ်း လုပ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ “ကွန်ဒုံး” အမြဲသုံးတယ်။ သုံးလတကြိမ် ဆေးစစ်တယ်။ သွေးစစ် တယ်။ ကျွန်မအမြဲပဲ ဆေးအောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်။ ဒီတော့လည်း ဂရုမစိုက်ချင်သလို ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာတင် ကျွန်မ လူတစ် ယောက်နဲ့ တကယ်ပဲ ချစ်ခဲ့ မိပါတော့တယ်။
အဲဒီ တစ်ယောက်သော သူနဲ့ပဲ အတူနေသွားကြဖို့ ကျွန်မ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ သွေး သွားစစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံး ဆေးအောင် ကြပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်လောက် ပျော်ခဲ့ ရပါသလဲရှင်။ ကျွန်မသိပါတယ်။သူဟာ သိပ်သစ္စာရှိတယ်။ သူကလည်း ကျွန်မကို ချစ်ကတိတွေ အမျိုးမျိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ဘဝမှာ ကျွန်မဟာ တစ်ဦးတည်းသော ချစ်သူပါတဲ့။ ကျွန်မတို့ ကွန်ဒုံး မသုံးကြတော့ ဘူးပေါ့။
၁၉၉၃ ခုနှစ်ကျတော့ သူရော၊ ကျွန်မပါ ခဏခဏ ဖျားနာကြပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တွေလည်း ကျလာ ပါရော။ ခဏခဏ ဝမ်းလျှော ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့ ဆရာဝန် သွားပြကြတော့ သူက သွေးစစ်ပါတယ်။ အလို ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ဆေးမအောင် ကြတော့ပါလား။ ကျွန်မ အကြီးအကျယ် ချောက်ချား သွားရ ပါပြီ။ ဘယ့်နှယ့် လုပ်ပြီး ဒီရောဂါ ကျွန်မကို ကူးစက်ခဲ့သလဲ။ ကျွန်မဟာ ချစ်သူ တစ်ယောက်နဲ့သာ အချိန်အကြာကြီး တွဲနေခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ ကျွန်မအပေါ် အလွန်သစ္စာရှိသူ မဟုတ်လား။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ ချစ်သူက ဝန်ချတောင်းပန် တော့တာပါပဲ။ သူ မျက်ရည်တွေ ကျရှာပါတယ်။ သူကပြောတယ်။ သူဟာ ကျွန်မနဲ့အတူနေစဉ် ကာလမှာပဲ တခြားမိန်းမတွေနဲ့ ပရောပရီ နေခဲ့ပါ သတဲ့ရှင်။ အကာအကွယ်တွေ ဘာတွေမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်း အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက သူဟာ အရက် မူး နေလို့ပါတဲ့။
အဲဒီကတည်းက ကျွန်မ သူနဲ့အတူ မနေတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ချစ်တာကတော့ ချစ်တုန်း ပါပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ သူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်။ ဒေါသဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ အမျိုးမျိုး စဉ်းစားပါတယ်။ သူလည်း လေ ကျွန်မလိုပဲ နေမှာပေါ့။
သူကျွန်မကို ချစ်နေတုန်းပဲနေမှာပါ။ သူလည်း ဝမ်းနည်းပူဆွေး နေရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ သူနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကိုရပ်ရပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်မ ဘယ်သူနဲ့မှ ပရောပရီ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မလည်း သေသေချာချာ သုံးသပ် လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ချူလာဆေးရုံမှာ ကျွန်မ အမြဲတမ်းပြသပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပိုမို ကြုံလှီ လာပါတယ်။ ဖျားနာ တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ မောပန်း နွမ်းနယ်တာလည်း အရမ်းပါပဲ။ ဆေးရုံ ကတော့ AIDS ရောဂါကို ဟန့်တားတဲ့ ဆေးတွေ အခမဲ့ ပေးပါတယ်။
ဗန်ကောက်မှာ နေတုန်းမှာပဲ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေး ကပ်ကြီးနဲ့ ကြုံရ ပါတော့တယ်။ ကျွန်မဝင်ငွေ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ကျွန်မ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် ဖွင့်ရပါတယ်။ အခန်းငှားခက တက်လာတယ်။ အစိုးရမှာ လည်းစီးပွားရေးကပ်ကြီးနဲ့ ကြုံနေတော့ အရင်လို AIDS ဆေးတွေ အခမဲ့ မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ရသမျှ ဝင်ငွေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ဝယ်သောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ပြန်ခဲ့ ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမတော့ ကျွန်မရဲ့ အခြေအနေကို ဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူး။ စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကလေးနဲ့ပဲ ချင်းမိုင် ဆေးရုံမှာ ကျိတ်ပြီး ကုသခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ရွာနဲ့ လည်း ကိုယ်ယောင် ဖျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ရှိတဲ့ငွေဟာ ကျွန်မ ဆေးကုဖို့ပဲ ပေါ့လေ။
အခုတော့ ကျွန်မဟာ ကျန်းမာရေး အာမခံကတ်ပြားလည်း လုပ်လိုက်ပါပြီ။ လန်းပန်းဆေးရုံရဲ့ ကူညီမှုကို လည်း ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ရရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်မဟာ လူကောင်း တစ်ယောက်လို သာမန်လူ တစ်ယောက်လို နေနိုင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပါပြီ။ ဖြစ်ရာ ဘဝမှာ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်အောင်လည်း နေတတ် နိုင်လာပါပြီ။ နေမကောင်း ထိုင်မသာ ဖြစ်လာတဲ့ အခါတွေတင် မကပါဘူး။ ကျွန်မဟာ အမြဲလိုလို ပုံမှန် ဆေးကုသ ခံနေပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် တွေကိုလည်း လိုက်နာနေပါပြီ။ ရွာမှာ ဆံပင်ညှပ် ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားလို့လည်း ဝင်ငွေကလေး ရှိနေပါပြီ။ ပြီးတော့ လန်းပန်း ဆေးရုံက ဖွင့်လှစ်တဲ့ Pnuan Keaw ကလပ်မှာလည်း လူမှုရေး ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်နေ ပါပြီ။ရောဂါ သည် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းပြီး အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်နေပါပြီ။ “သက္ကရာဇ် ၂၀ဝ၀ မှာ လူတိုင်းကျန်းမာ” ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ကလေးနဲ့ပေါ့။
- အတိတ်ကို ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့
- ကိုယ့် အပြစ်တွေကို ပြန်လည် ဆေးကြောမယ် ဆိုရင်ပေါ့
- အကောင်းဆုံးကတော့ HIV ပိုး ကင်းသူ ဖြစ်သင့်တာပေါ့….
- ချစ်သူကို လုံးလုံးကြီး မယုံကြည် လိုက်ပါနဲ့ …..
- ပုံပြီးချစ်လိုက်မယ်ဆိုလည်း AIDS သူငယ်ချင်းကို သတိထားကွယ်။
- တနေ့ကလေးမှားတာနဲ့ သေမင်းက မြန်မြန်လာမှာကွယ့်။